mairie-antananarivo – Fidinana ifotony fijerena ireo taratasy fahazoan-dalana hanorina trano
Fidinana ifotony fijerena ireo taratasy fahazoan-dalana hanorina trano
auteur 20 janoary 2017 Commentaires fermés
Nijery ifotony ireo taratasy fahazoan-dalana hanorina trano teny Ankadindramamy, Analamahitsy, Andraisoro ary Mahatony Ivandry ny Boriborintany fahadimy omaly. Nanatona ireo rehetra manatanteraka asa fanorenana trano ny Delegen’ny Boriboritany sy ireo tompon’andraikitra avy ao amin’ny Direction de l’Urbanisme et du Développement (DUD).
Tompona trano maro andalam- panorenana kanefa tsy manana taratasy ara- dalàna no nomena taratasy fampitandremana ary mba hanatona ny Biraon’ny Kaominina foibe. Nisy ireo sasany izay eo am-piandrasana ny taratasy fahazoan-dalana kanefa efa nanorina avy hatrany ka nasaina nampiato ny asa rehetra mandra- pivoahan’ ny taratasy.
Miantso ireo rehetra mikasa hanorina sy an-dalam- panorenana trano ny fiadidina ny tanànan’Antananarivo mba hanara- dalàna, ary mampitandrina ireo minia mandika izany fa misy ny sazy izay miandry azy ireo. Nambaran’ny Lehiben’ny Boriborintany fahadimy, RAKOTO Emmanuel Richard, fa tsy hamela mora ny fanahy iniana ataon’ny olona sasany izy satria tsy misy ambonin’ny lalàna na iza na iza ka tsy maintsy manara-dalàna avokoa ny rehetra amin’izay resaka fanorenan-trano izay.
AO ANATY » ny Lalàna